महानायक राजेश हमालको यो वर्षको जन्मदिन विशेष बन्यो, साइकल उपहार पाएपछि मख्ख (भिडियो हेर्नुस्) – live 60media
महानायक राजेश हमालको यो वर्षको जन्मदिन विशेष बन्यो, साइकल उपहार पाएपछि मख्ख (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । महानायक राजेश हमालले आफ्नो ५६ औं जन्मदिन फरक तरिकाले मनाएका छन् । हरेक वर्ष उनले कुनै मन्दीर र अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई सहयोग गरेर जन्मदिन मनाउने गरेका थिए । तर लकडाउनका कारण अहिलेको उनको जन्मदिन फरक भएको छ । घरमा सामान्य तरिकाले श्रीमतीसंग जन्मदिन मनाएका राजेशले साँझ भने एउटा रेष्टुरेण्टमा सामान्य तरिकाले केही सिमित साथीका बिचमा जन्मदिन मनाएका छन् । यो पटकको जन्मदिनमा एक जना साथीले साइकल उपहार दिएका छन् । लकडाउनमा आफ्नो स्वास्थ्य र शारिरीक सुगठनमा ध्यान दिने गरेका छन् ।
उनले घरमै आफ्नो शरिरको तौल ब्यवस्थापन गर्ने तरिकाको एक्सरसाइज गरेका भिडियो र तस्बिर सार्वजनिक हुने गरेका छन् । लकडाउनका समयमा उनले श्रीमतीसंग विताएका रमाइला पलका भिडियो पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । लकडाउनका कारण घर वाहिर निस्कन नपाएका राजेशले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामाजिक र राजनीतिक विषयमा आफ्ना धारणा पनि सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
उनले हालै सिमानाको विषयमा जसपाका सांसद सरिता गिरीले दिएको अभिब्यक्तिको विषयमा पनि धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले त्यसवाहेक लकडाउनमा कसरी आफ्नो समयलाई राम्रोसंग ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र कोरोनावाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि जाकारी मुलक सामग्री सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
आफ्नो ५६ औ जन्मदिन मनाउदै गरेका नायक राजेशले आफ्नो उमेरका बारेमा संधै ठट्यौली जवाफ दिने गरेका छन् । उनले आफु जहिले पनि जवान महशुष गर्ने र उमेरका बारेमा कहिल्यै नसोच्ने बताएका छन् । निकै ढिलो विवाह गरेका राजेश हमाललाई विवाह अघि जहिले पनि आउने एउटा प्रश्न थियो कहिले विवाह गर्ने ? अहिले उनको मधु भट्टराईसंग विवाह भएको ६ वर्ष पुरा भएको छ ।
अहिले उनको फ्यानको प्रश्न फेरीएको छ । उनलाई अहिले कहिले बच्चा जन्माउने ? भनेर सोध्ने गरेका छन् । विवाह लगत्तै नायक राजेशले आफुहरुले बच्चाको बारेमा नसोचेको बताएका थिए । त्यस पछि पनि सोही प्रश्न दोहोरीने गरेपछि राजेशले त्यसको जवाफ पनि ठट्यौली पाराले दिने गरेका छन् ।
← कुवेतबाट ३०० महिला कामदारलाई लिएर काठमाडौँ उडे २ जजिरा एयर